Ulwazi kwabahola impesheni – Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds
/ Ulwazi kwabahola impesheni
Abahola impesheni bangababambiqhaza ababaluleke kakhulu. ISikhwama cishe sinabahola impesheni abangu 10 000 kuhlanganisa nama-Dependent/Abahlomulayo. Iminyaka yokuthatha umhlalaphansi ngokweMithetho ingama-65 bese kuthi ukuthatha umhlalaphansi singakafiki isikhathi, iminyaka engama-55 eSikhwameni se-Superannuation, bese kuba iminyaka ewu 58 eSikhwameni seRetirement uma umuntu esesebenze iminyaka eyishumi.
Ama-Dependent/Abahlomulayo bayingxenye yabahola impesheni abangu 10 000. Laba-bantu, ikakhulukazi, bangabafelokazi kanye nezingane zamalungu ashona kanye nabaHola impesheni abathola imali yempesheni nyangazonke eSikhwameni.
Izinsuku zokuhola kwabahola impesheni
Izinsuku zokuhola ku 2019 ziveziwe ngezansi:
Inyanga Usuku lokuhola
Qaphela: Lezi zinsuku ziyinkomba nje kuphela. Impesheni iyohlezi ikhokhwa ekupheleni kwenyanga
Ibhonasi isikhokhwe iminyaka eminingi ilandelana ngakho-ke kusobala ukuthi abahola impesheni bezikhwama zombili babuke ukukhokhwa kwebhonasi njengokulindelekile. Nakuba kunjalo, uMthetho 37A weSikhwama se-Superannuation, kanye noMthetho 31 weSikhwama seRetirement, uvumela ama-Trustee ukunikeza ibhonasi kubaholi bempesheni uma nje imali yalokhu yenele ukukhokha ibhonasi. Lokhu kusho ukuthi ama-Trustee abuyekeza isimo sezezimali se-Akhawunti ye-Memorandamu yalabo abahola impesheni ezikhwameni zombili njalo ngonyaka bese enika ibhonasi uma i-Actuary ikuvumela ukuthi i-Akhawunti ye-Memorandamu ingakwazi ukukhokha. Ngakho-ke amalungu/ abahola impesheni kufanele bazi ukuthi ukukhishwa/ukukhokhwa kwebhonasi akuqinisekisiwe.
Lokhu kusho futhi ukuthi “iKomiti, ngokwelulekwa yi-actuary, ngoNovember minyakayonke, lingakhokha kubona bonke abahola impesheni, umfelokazi, ingane, umama noma ubaba ohola impesheni ibhonasi yakhe yonyaka engeqile impesheni yenyanga eyodwa, uma nje impesheni ikhokhwa ngokuqhubeka konyaka, imali yebhonasi yaminyaka yonke iyoncishiswa
Ukuhanjiswa kwamafomu ayisiqinisekiso sokuthi uyaphila
Ukugcwaliswa nokuhanjiswa kwamafomu obufakazi bokuthi ohola impesheni usaphila kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa iSikhwama ngobufakazi bokuthi ohola impesheni usaphila. Yisona isizathu lesi iSikhwama sigcizelela ekulethweni kwefomu yobufakazi esayinwe phambi kwe-Commissioner of Oaths (onezibophezelo ezithile zokuqinisekisa ukuthi okuphambi kwayo (Commissioner of Oaths) kuyikona futhi kuyiqiniso.
Lokhu kusiza futhi ukuvikela izicelo eziyinkohlakalo lapho ohola impesheni eseshonile bese kuthi umuntu wesithathu aqhubeke ahole impesheni yalowo oshonile.
Amafomu obufakazi athunyelwa ngeposi kanye ngonyaka ngenyanga yokuzalwa kwalowo ohola impesheni. La mafomu kufanele abuyiswe ingakapheli inyanga emva kosuku lokuzalwa lwelunga. Ukuhluleka ukwenza lokhu kuyoholela ekumisweni kokukhokhwa kwempesheni.
Ukugcwaliswa kwamafomu kungenziwa futhi emahhovisini eSikhwama ngosizo lwabasebenzi.
IFOMU EWUBUFAKAZI BOKUPHILA-DECEMBER 2013
“IKomiti liyobuyekeza ukukhokhwa kwempesheni ekhokhwe eSikhwameni kanti linganquma ukuthi impesheni ikhushulwe. Nanoma yikuphi ukukhuphuka empeshenini kuyokwenziwa ngenqubomgomo yokukhuphuka kwempesheni okwavunywa yiKomiti ngokuxhumana ne-actuary isikhathi nesikhathi, kanti iyokhokhwa kusukela osukwini olubekwe kwinqubomgomo yokukhuphuka kwempesheni futhi kuncike nasebuncaneni bokukhuphuka kwempesheni nokwemigomo yoMthetho.”
Eminyakeni edlulile nansi imihlomulo ebesiyinikeza;
Esikhwameni se-Superannuation imihlomulo ikhuphuke yafika ku 78% (ukukhuphuka kwempesheni ngo 36.59% kuhlanganisa namabhonasi ka 41.65%).
Esikhwameni soMhlalaphansi imihlomulo ikhuphuke yafika ku 65% (ukukhuphuka kwempesheni ngo 39.97% kuhlanganisa namabhonasi ka 24.99%)Esikhathini esingeside esedlule i-NJMPF inikeze imihlomulo ebalelwa ku 22.73% seyihlanganisiwe kubaholi bempesheni obekuhlnganisa no 14.40% wokukhuphuka kanye nebhonasi ka 8.33%.
Amaphepha enqubomgomo yokukhuphuka kwempesheni eSikhwameni se-Superannuation 2016
Amaphepha enqubomgomo yokukhuphuka kwempesheni eSikhwameni soMhlalaphansi-2016